Jaava Assooti amuraati Irko
LibreOffice Jaava assooti amuraate loosatenna karsoho JaavaBiinooti arkitekichere kaiminni irkisanno.
LibreOfficera Jaava assooti amuraate irkisate, Jaava 2 Ha'risayanna Invayironmente yinanni sooftiweere bayisiisa hasiissannohe. LibreOffice bayisiisittoro, bayichonkonni konne assite heedheenano bayisiisama hoogguha ikkiro kuri fayilla bayisiisate doorsha adhatto. Xam'ituha ikkiro kuri fayilla xaanni bayisiisate dandaatto.
Jaava assooti amuraati iirko Jaava loosiinasnnite harinshora LibreOffice hundaanni baqqado ikka hasiranno.
Jaava assooti amuraati irko LibreOffice - DooroUduunne - Doorsha - LibreOffice - Luphiimadooratenni baqqado assi.
JDBC oofaancho horoonsira dandaattora alba assite, Kifilesiha haruma alba sssite ledattora hasiisanno. LibreOffice - DoorootaUduunne - Doorshuwa - LibreOffice - Luphado doori, qolte kifilete harumi ilka qiphisi. Harumu mashalaqqe ledde kaitto gedensaanni,LibreOffice galagaltte hanafi.
Soorrokki LibreOffice - DoorshootaUduunne - Doorshuwa - LibreOffice - Luphdo giggishshi qooli aana Jaava Virchuwaale maashiine JVM, virchuwaalel maashiine Jaava assooti amuraatira)nafa ikkiro horoonsi'ra dandiinanni. Kifilete harumira soorrinihu gedensaanni LibreOffice galagale hanafa hasiissannohe. Togo assa LibreOffice - DoorootaUduunne - Doorshuwa - Surki - Gaa'ladohattonni loossanno. Lame saaxine calla "Http Gaa'lado" nna "Ftp Gaa'lado" hattono insa lawooti galagale hanafa dihasidhannoreeti, insa keenantannohu EEqiphisittoha ikkirooti.
Title is: Jaava Assooti amuraati Irko